Webhosting Web - VipCasting.cz
Webhosting maka n'efu
free, mba, internet, enweghị njedebe, na-akparaghị ókè, Webhosting, free, free
Webhostingbụ ohere mgbazinye maka weebụsaịtị na ihe nkesa mba ọzọ. A na-akpọ onye na-agbazinye onye ọrụ nchekwa dịka onye na-elekọta weebụ (webspace).
Get Unlimited Web Bochum Pịa ebe a!
Site na onye nlekọta weebụ, ị nwere ike itinye saịtị gị na Ịntanetị n'enweghị inwe ihe nkesa gị. Ọnụahịa maka ntanetị weebụ site na ọnụọgụ abụọ na ọtụtụ puku CZK kwa ọnwa. Enwekwara nhọrọ nhọrọ, nke a na-akpọ freehosting. Enweghi ike itinye ikikere ọ bụla na arụmọrụ, ọ nwere nkwado nkwado. Ọtụtụ mgbe, ntinye aka na saịtị na freehosting.
Na enye na-emekarị na-akọrọ mba na-enye scripting teknụzụ PHP, asp, ASP.NET, JSP, etc .., Databases na-awa isi MySQL, PostgreSQL na MS SQL. A na-ejikarị FTP eme ihe na ibe na ihe nkesa.
Nchịkọta weebụ bụ naanị saịtị saịtị na saịtị ahụ. Ka ndị ọrụ Ịntanetị banye na saịtị ahụ, ịkwesịrị inwe ngalaba aha (dịka aha aha ụlọ ọrụ). N'aka nke ọzọ, ụlọ ọrụ ụfọdụ nwere ike iji mpaghara 3 maka n'efu. ka ihe atụ, vasejmeno.poskytovatel.cz.
Ihe ka ọtụtụ n'ime ọrụ nchịkọta weebụ gụnyere igbe ozi mail na nzacha antispam na antivirus, ozi POP3 na-ezigara ozi ndị ahịa, ozi SMTP na-ezipụ.
N'ezie, e nwekwara ndị oru nkwado maka ndị ahịa, ya bụ otu nhọrọ na ikpe nke na ọrụaka nsogbu ma ọ bụ ajụjụ na kọntaktị na-eweta site na ekwentị, e-mail, ICQ, Skype na ndị ọzọ. Mgbe ụfọdụ, ndị oru nkwado a na-ejedebeghị na weekdays, na ihe siri ike ụlọ ọrụ bụ na-abụghị nkwụsị support.
Ihe nchịkọta weebụ nke ntanetị bụ na otu onye na-ahụ maka nkesa na-ejikarị ọtụtụ narị mmadụ ma ọ bụ ọtụtụ puku ndị ahịa ahịa weebụ. Ya mere, ọ bụrụ na ọ bụ otu nsogbu ma ọ bụ ibugharị, ọ nwere ike ịmetụta ma ọ bụ ọbụna nwere nkwarụ site n'aka ndị ọzọ na otu nkesa. Uru bụ, na Kama nke ahụ, ọnụahịa dị ala - onye ahịa nke onye na-ahụ maka weebụ na-akwụ ụgwọ naanị ntakịrị ego ole ọ ga-efu ihe nkesa ya.
Nbudata weebụ na-ekonye - ụdị isi weebụ nke ebe onye ọrụ na-arụ ọrụ otu ngalaba 2. iwu.
Multihosting - Bochum ọtụtụ ngalaba. Ihe ndi mmadu nwere na-eto eto karia n'ihi ndi mmadu nwere obere ebe ma obu umu mmadu.
Nbudata Nchọta - Igwe na-emepụta ihe na-enye nnukwu nhazi na arụmọrụ ka ukwuu. Otú ọ dị, arụmọrụ / ego dị oke mma dị ka ngwọta ndị gara aga ruo na isi. Ọ kachasị mma maka ndị ọrụ na Linux ihe ọmụma na maka ụlọ ọrụ ndị ọzọ karịa ọrụ weebụ. Ọtụtụ mgbe eji ụdị nke ihe nkesa kwadoro bụ ihe nkesa onwe ya.
Ogwe njikwa - onye na-eweta na-ahapụ onye nkesa nke onye ahịa, nke nkwado nkwado ya kwadoro. Otu n'ime ihe ngwọta kachasị mma.
Ihe nkesa raara onwe ya nye. Enweghị ihe ize ndụ maka enweghị nsogbu nke ihe nkesa ma ọ bụ ihe karịrị ngwa ngwa nke ndị ahịa ndị ọzọ. Akụkụ dị mkpa nke ihe nkesa raara onwe ya nye bụ adreesị IP ya.
Serverhousing - Ebe nke igwe nke gi na telefonu nke onye na enweta gi.
CloudHosting - N'oge a, CloudHosting amalitewokwa inye ndị ahịa ikike iji chekwaa data ha onwe ha na ohere diski ha raara onwe ha nye, ụlọ ahịa dị elu na ịnweta ndị ọzọ.
Ụdị ndị ọzọ dị iche iche nke Bochum nnukwu ngwa gụnyere CRM, Exchange na ọrụ ndị ọzọ SaaS.